သမီးကြီးရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် သံဃာတော်များအတွက်နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး မိဘမဲ့ကလေးများကိုအဟာရဒါနလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နိုင်းနိုင်း – Myanmar Hot News
ပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့မှာတော့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်းနိုင်းရဲ့သမီးကြီးဖြစ်သူ Floreece ရဲ့(၁၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်းနိုင်းကတော့သမီးကြီး Floreece ရဲ့မွေးနေ့အတွက် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာယခုလိုပဲမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။
“Happy Birthday…သမီးကြီး Floreece. မနက်ဖြန်ဆို ၁၁နှစ်ပြည့်ပါ။ ဘဝမှာကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး လိုအင်ဟူသမျှပြည့်ပါစေ”ဆိုပြီးရေးသားကာ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သမီးကြီးရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရအလှူအဖြစ်လည်း သံဃာတော်များအတွက်နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး မိဘမဲ့ကလေးများအတွက်လည်းအဟာရဒါနအဖြစ်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအလှူအကြောင်းလေးကိုတော့”သမီးကြီး၏ မွေးနေ့အလှူလေးပါ။ ချစ်သောသူများ ကိုလည်း ဝေမျှပါတယ်။ အေးချမ်းကြပါစေ”ဆိုပြီးရေးသားကာ (၇)ရက်သားသမီးအပေါင်းသာဓုခေါ်လို့ရအောင် အလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သမီးကွီးရဲ့မှေးနအေ့လှူအဖွဈ သံဃာတျောမြားအတှကျနဆှေ့မျးဆကျကပျလှူဒါနျးခဲ့ပွီး မိဘမဲ့ကလေးမြားကိုအဟာရဒါနလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ နိုငျးနိုငျး
ပရိသတျကွီးရဒေီနနေို့ဝငျဘာလ(၁၂)ရကျနမှေ့ာတော့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျနိုငျးနိုငျးရဲ့သမီးကွီးဖွဈသူ Floreece ရဲ့(၁၁)နှဈပွညျ့မှေးနရေ့ကျမွတျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ နိုငျးနိုငျးကတော့သမီးကွီး Floreece ရဲ့မှေးနအေ့တှကျ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာယခုလိုပဲမှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးထားခဲ့ပါတယျ။
“Happy Birthday…သမီးကွီး Floreece. မနကျဖွနျဆို ၁၁နှဈပွညျ့ပါ။ ဘဝမှာကနျြးမာ စိတျခမျြးသာပွီး လိုအငျဟူသမြှပွညျ့ပါစေ”ဆိုပွီးရေးသားကာ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူဖျောပွပေးထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သမီးကွီးရဲ့မှေးနအေ့မှတျတရအလှူအဖွဈလညျး သံဃာတျောမြားအတှကျနဆှေ့မျးဆကျကပျလှူဒါနျးခဲ့ပွီး မိဘမဲ့ကလေးမြားအတှကျလညျးအဟာရဒါနအဖွဈကုသိုလျပွုလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါအလှူအကွောငျးလေးကိုတော့”သမီးကွီး၏ မှေးနအေ့လှူလေးပါ။ ခဈြသောသူမြား ကိုလညျး ဝမြှေပါတယျ။ အေးခမျြးကွပါစေ”ဆိုပွီးရေးသားကာ (၇)ရကျသားသမီးအပေါငျးသာဓုချေါလို့ရအောငျ အလှူပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူဖျောပွပေးထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။